Vondronasa vola sy fananana - FPMA Toulouse
SintonyPartager Henoy Vondronasa vola sy fananana Ny Asan'ny Vondronasa Vola sy Fananana Écrit par Administrator Mercredi, 19 Janvier 2011 23:01 Ny Vondron'asa Vola sy Fananana dia vondron'asa maharitra mitovy amin'ireo telo hafa misy eto amin'ny Fiangonana.
Toy izao no sahan'asa ny Vondron'asa Vola sy Fananana:
Fiheverana izay hahatsara hatrany ny fitantanam-bola eto amin'ny Fiangonana.
Famolavolana teti-bola miaraka amin'ireo tompon'andraikitry ny vola
Mifanampy amin'ny fandavorariana ny tatitry ny vola atolotra ny Komity sy ny Fivoriambe miaraka amin'ny tompon'andraikitry ny vola .
Fikarohana fomba mahomby sy ara-pilazantsara mba tsy hahatonga ny enti-manana ho vato misakana eo amin'ny fanantanterahana ny asan'ny Fiangonana.
Fanofanana mpitantam-bola. * Fiandraketana ny fananan'ny Fiangonana.